Check this out: 2008
Do not use that link and program, If you used it already. Changing your password rapidly
အကိုအမများ၊ သူငယ်ချင်းများခင်ဗျား ...
ဒီလင့်ကို လုံးဝအသုံးမပြုကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ e-mail account နဲ login မလုပ်မိဖို အရေး ကြီးပါတယ်။ IT technician ညီလေးတယောက် သတိပေးတာပါ။ ဒီလင့်ကိုသုံးမိရင် ကိုယ်မသိဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ password ကို ခိုးယူပြီး အခြားသူတွေဆီကို မေးလ်တွေ အလိုလို ပို တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ အချက် အလက်တွေကိုလည်း ခိုးယူတတ်ပါတယ်။ စုံစမ်းလို့ရသလောက်ဆိုရင် နအဖဘက်က အစီစဉ်တကျ လုပ် ဆောင်နေတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ လက်လှမ်းမီသလောက်လည်း ဖြန့်ဝေပေးကြပါ။ ၀င်လာတဲ့ မေးလ်တွေ ကိုလည်း သေချာစိစစ်ပြီးမှ အကြောင်းပြန်တာမျိုး လက်ခံတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။
- http://gtalkbomber.mail2customer.com !! Dangerous site ... who know they steal your password and get mail from inbox .. to look for something that government wants ...
Posted by Nay Linn Aung at 12:39 AM No comments:
"သူ့မိန်းမက အိမ်ထောင်မှု ဘယ်လောက်ထိန်းနိုင်တယ်၊ သူ့ချစ်သူက
ဘယ်လိုကြင်နာတတ်တယ်"လို့ ကိုယ့်မိန်းမ၊ ကိုယ့်ချစ်သူကို
တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ မနှိုင်းနဲ့။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူနေခွင့်ရတာ
အဲဒီလိုကိုယ့်အတွက် အပန်းမကြီးတဲ့ နှုတ်ဆက်ခြင်းတွေ၊ အပြုအမှုတွေက
ကြည့်ရဆိုးတာ မရှိဘူး။ ကိုယ်က အပြင်မှာ မအားမလပ် စီးပွါးရှာနေသလို သူလည်း
အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိရပေးပါ။ ကိုယ်အလုပ်က ပြန်ရောက်ရင် "
မိန်းမရေ.. ပင်ပန်းနေပြီလား" နဲ့ " မပင်ပန်းပါဘူး.. အပြင်ထွက်
အလုပ်လုပ်တဲ့ ယောက်ျားက ပိုပင်ပန်းတာ" ဆိုတဲ့ အပြန်အလှန် စကားပုံရိပ်တွေက
ယောက်ျားတွေက အလုပ်ပြိုင်၊ ရာထူးပြိုင်သလို မိန်းကလေးတွေလည်း
ကိုယ့်ယောက်ျား၊ ကိုယ့်ကလေးအကြောင်း ပြိုင်တတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်
သူဟာထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်အပေါင်းသင်းရှေ့မှာလည်း
ချောတဲ့မိန်းကလေးကို ကြည့်တဲ့ ကိုယ့်အကြည့်ထက် ရိုးသားပါတယ်။
ကြည့်ရှုခံစား သလိုပဲ ယောက်ျားလေးတွေလို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်တာတွေ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရိုက်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလောက် အောက်တန်းကျတာ မရှိဘူး။
သူ့ကိုတကယ်ချစ်ရင် အပြန်အလှန် လေးစားမှုဆိုတာ ရှိသင့်တယ်။ လက်မပါသင့်ဘူး။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ထက်မြက်နေပါစေ ယောက်ျားတစ်ဦးရဲ့
အလုပ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်အောင် နေတတ်ဖို့နဲ့ အလုပ်ရဲ့ ကျေးကျွန်မဖြစ်ဖို့
ဘယ်လိုဂရုစိုက် လေးစားရမယ်ဆိုတာကို သူတို့ သိမြင်ပါစေ။ ဒါမှ
Posted by Nay Linn Aung at 7:47 PM No comments:
Posted by Nay Linn Aung at 11:29 PM No comments:
Do not use that link and program, If you used it a...
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်းမြင်ချင်ပါသလား? ...
Yes, animals are more deluded because of their cap...